Madagasikara-India : latsaka antsasa-manila amin’ny entana afarana ny aondrana | NewsMada
Madagasikara-India : latsaka antsasa-manila amin’ny entana afarana ny aondrana
Tsy mifandanja ny karazan’entana sy ny vidiny eo amin’i Madagasikara sy India. Vokatra tena fanondrany aty amintsika, ny vary, ny fanafody, raha aondrana any India ny jirofo, ny lavanila, ny vatosoa.
Firenena matanjaka amin’ny lafiny indostria sy varotra i India. Manamarina izany ny hamaroan’ny vokatra aondrany aty Madagasikara. Ny taona 2016, nitentina 566 miliara Ar ny vokatra nohafaran’i Madagasikara avy any India. Entana tena fanafatr’i Madagasikara avy any India ny vary, ny fanafody, ny fitaovana sy kojakoja indostria samihafa.
Etsy ankilany, saika latsaka antsasa-manila amin’ny tentimbidin’ny entana hafarana io ny aondran’i Madagasikara mankany India. Raha 566 miliara Ar ny afarana, zara raha mitentina 259 miliara Ar ny vokatra aondrantsika mankany India, ny taona 2016. Tena fanondrana ny jirofo, ny lavanila, ny vokatra harena an-kibon’ny tany. Raha ampitahaina ireo, misy elanelany 307 miliara Ar ny entana hafarantsika any India, miohatra amin’ny aondrana any aminy.
Matanjaka ny indostria indianina
Tsikaritra fa vokatra voahodina ny tena hafaran’i Madagasikara avy any India, satria matanjaka ny indostria any aminy, ka mahavita mamokatra karazan-javatra samihafa izy. Anisan’izany ny lafiny kojakoja ilaina andavanandro, ny mekanika, ny lamba, sns.
Maro koa anefa ny vokatra ara-tsakafony, indrindra ny vary, ary aondrany any ivelany ny ambim-bavany, fa tsy firenena mihemotra toa an’i Madagasikara.
Etsy andaniny, hafarany any aminy ny vokatra tsy voahodina ary mbola ahazoany tombony indray avy eo, toy ny harena an-kibon’ny tany. Miteraka asa ho an’ny olom-pirenena any India ihany koa ny fanodinana akora fototra toy izany. Mahavariana fa tsy ahitana toa an’izany eto Madagasikara, fa aondrana tsy voahodina any ivelany ny ankamaroan’ny harena an-kibon’ny tany.
Tsy hita mivaingana koa ny tena fanohanana mivantana ny indostria eto an-toerana, ka tsy mahagaga raha kely hery miohatra amin’ny entana hafarana avy any ivelany.